Tani Converter awood video in ay la tacaalaan noocyada kala duwan ee video files iyo waxa ay sidoo kale bixisaa soo diyaariyeen Wayn ee qalab-ba video iyo saamaynta audio. Ugu habboon video Converter bedeli lahaa iyo ka qaab kasta file Dhulka ku sugan, kuu ogolaado in la beddelo wax soo saarka ugu danbeeya ee habka wax. Waa software si dhakhso ah oo aamin ah. Haddii aad ka raadin internet-ka, waxaad heli kartaa lacag la'aan ah ay version.
Waxaad u bedeli karaan noocyada kala duwan ee qaab video si fudud inkastoo Converter this. Waxay leedahay fududahay in la isticmaalo qalab oo fudud si ay u isticmaalaan. Waxa ay taageertaa qaabab kala duwan sida, MP4, AVI wmv, FLV, MPEG, 3GP, MOV, iyo in ka badan kaliya labo ka mid ah tallaabooyinka. Qaab kasta oo la AHV Video Converter ayaa doorashooyin ay shaqsigu, taas oo aad la oggalaado in noqanayaa goobaha qaarkood sida size 8frame, video codec, iyo tayada audio.
Converter waxa kale oo uu leeyahay qalab gaar ah oo tafatir aad kaas oo edit karaa barnaamijka oo dhan. In kastoo qalab tafatirka, waxaad edit karaa audio iyo sidoo kale qaab video. Waa qalab weyn oo fudud si ay u isticmaalaan. Halkan, waxaan ku siin doonaa dib u eegista sare ee dadka isticmaala iyo baraha warbaahinta. Software ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah gaar dhisay-in DVD gubi.
Part1: The Reviews Good
Part2: Top 5 dib u eegista xun ee Media Sites
Part3: Top 5 AHV kale oo video Converter
Top 5 dib u eegista goobta warbaahinta
1. teknoolajiyada warbaahinta Online
Meesha la sheegayaa saabsan qaabab kala duwan AHV badalo kartaa video files si, guuleyste dhab ah la tirada qaabab laga heli karaa.
URL - http://download.cnet.com/AVS-Video-Converter/3000-2194_4-10629027.html
Top Toban Review sheegayaa AHV leeyahay dhamaan qalabka saxda ah si ay u guulaystaan ​​iyo ka dhigi kartaa video sixiddiisa badan oo dhan fudud.
Softonic ayaa sheegay in sida tani waa mid ka mid Converter video awood leh in uu leeyahay qaar ka mid ah qalabka tafatirka la yaab leh loogu isticmaalo. Dib u eegista ayaa sheegayaa sida video AHV ka Converter noqon kartaa doorasho wacan u badan.
URL - http://avsvideoconverter.en.softonic.com
Meesha la sheegayaa xaqiiqda ah in AHV ciyaari karo files FLV quruxsan si fudud, taas oo soocaya badan oo kale converters video. Plus, ay size yar oo bixiya tayo fiican leh.
URL - http://www.miracletutorials.com/avs-video-converter-review/
5. Best Tablet Converter
Goobta mareegtan sheegayaa sida AHV shaqayn karo qalabka kala duwan fudayd iyo inta fududahay in lagu daro saameynta kala duwan si ay faylasha. Si aad ku dari waa in, la abuuro shakhsi videos iyo files gubanaya waa u fududahay.
Top 5 dib u eegista Good ka users
1. By Hans De Brouwur
User ayaa sheegayaa sida uu waayo-aragnimo la AHV ayaa waxba gaaban ee gaar ah.
URL - https://www.trustpilot.com/review/www.avs4you.com By Oma Viles
2. Iyada oo Viles
Falanqayayaasha waxay sheegayaa sida adeegga dhakhso ah AHV ka caawiyay isaga xal u helidda dhibaatada markii uu u wareegay uu kombiyuutar mid cusub.
URL - https://www.trustpilot.com/review/www.avs4you.com
3. By Fred
Fred sheegayaa sida AHV muujiyeen xaqiiqada ah in taageero macaamiisha AHV roon sixun, oo iyana way u fudud u caawiyeen.
Ralph dhigayaa sida software ah u suurtagashay in ay u ordaan oo aan wax dhibaatooyin ah ee OS daaqadaha dambeeyay.
Barrie sheegayaa sida software wuxuu awood u yeeshay is ogow of baahida oo dhan si fudud.
Top 5 dib u eegista xun ee users
1. By skyhr
Skyhr ayaa sheegay in ay jiraan arrimo audio video syncing muhiim ah la software ah.
2. By avs4youisaripoff
User ayaa sheegay in sida mid aan ka mid computer guuri kartaa laysanka user a si kale, xataa haddii ay yihiin user la mid ah.
3. By karenrenepet
User ayaa sheegay in halka interface ahaa user saaxiibtinimo, kala carar ah loogu tala galay in uu xitaa ma dhameysan yaabaa mashruuca hore.
User ayaa sheegay in AHV aan odhan in AHV ma sheegi macaamiisheeda in liisanka ay kaliya ku computer.
"Waxaan ku iibsaday xubin ka Meyeydaan iyo waxa aadan oo ay idiin sheegaan waa xubin mulkigooda aan ku lifaaqan iibsadaha, laakiin kombiyuutarka aad ku shuban on. Marka aad bedesho kombiyuutarada, aad leedahay si aad u iibsato shati kale. "
User ayaa sheegay in video AHV ka Converter waxaa dhacsan iyo ma jirin ilaa waqti.
"Converters Free waa la ciyaaray, iyadoo functional laakiin qaar ka mid ah sababta suuq waalan ay weli aaminsan yihiin in aad bixiso kirada ah sanad walba mudnaan gaar ah la isticmaalo software-ka."
1. Magaca - WondershareVideo Converter Free
Magaca URL - http://download.wondershare.com/video-converter-free_full1129.exe"
Muuqaalada Key -
Waa lacag la'aan ah oo sahlan in ay isticmaalaan video Converter
Waxa kale oo ay bixisaa hawlaha tafatirka ee barnaamijka-
Waxaa ku milmaan karaa dhowr clips ka mid ah galay
2. Magaca - gacan-jabis
Magaca URL - https://handbrake.fr/rotation.php?file=HandBrake-0.10.2-x86_64-Win_GUI.exe"
Gacan-jabis waa furan-il, multithreaded video transcoder
Waxaa badasha warbaahinta digital ka mid qaab in kale.
Waa soon iyo ammaan
3. Magaca - Avidemux
URL - http://sourceforge.net/projects/avidemux/files/latest/download
Avidemux waa editor a free video loogu talagalay hawlaha goynta, shaandhaynta iyo Deji fudud
Waxa ay taageertaa noocyada file badan, oo ay ku jiraan AVI, DVD socon files MPEG
Waxa kale oo ay taageertaa MP4 iyo ASF, iyadoo la isticmaalayo noocyo kala duwan oo codes
Easy si loo soo dajiyo iyo sahlan in ay isticmaalaan
4. Magaca - VirtualDub
URL - http://sourceforge.net/projects/virtualdub/files/latest/download
VirtualDub waa video qabashada korontada / processing
Waa kaamilka ah laptop 64 yara
Rukhsad hoos License GNU General Dadweynaha (GPL)
Waa soon iyo ammaan ah si loo soo dajiyo
5. Name- Freemake Video Converter
URL - http://download.freemake.net/FreemakeOriginals2/FreemakeVideoConverterSetup.exe"
Iyada video Converter this, aad u bedeli karaan noocyada kala duwan ee videos ka youtub, metatube iwm
Waxaad ka heli kartaa software this ee lacag la'aan ah oo ah qiimaha
Waxaad kala soo bixi kartaa ama badalo 50 + goobaha videos.
Inta badan dadka u isticmaali this video ay videos.
Top 30 ciyaaryahan music online, ha ka maqnaan
Top 10 Text Services Fariin Mass ee Suuqa
Top 20 video free converters audio.
TOP 10 Cloners CD Best
10 qosol Qalin-Hadalka
> Resource > Top List > AHV dib u eegista video Converter oo kale oo